भखरै जारी भयो यस्तो निर्णय , निषेधाज्ञा हुने भयो खुकुलो , यस्ता छन नया नियमहरु , यस्ता नियम अपनाय सबै दिन पसल खोल्न पाउने ? - Nepali in Australia
June 28, 2021 autherLeaveaComment on भखरै जारी भयो यस्तो निर्णय , निषेधाज्ञा हुने भयो खुकुलो , यस्ता छन नया नियमहरु , यस्ता नियम अपनाय सबै दिन पसल खोल्न पाउने ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ। यद्धपी एकसाताका लागि भने निषेधाज्ञा थपिएको छ । थपिएको निषेधाज्ञामा धेरे कुरा खुकुलो पारिएको छ । निश्चित घण्टा मात्र संचालन गर्न पाउने पसल निर्वाध खुल्ने भएका छन् । कपडा लगायतका पसल पनि संचालन हुने भएका छन् । यसअघि पसलहरुलाई वर्गीकरण गरेर तोकेको दिनमात्र खोल्न दिइएको थियो।
अब भने सबै प्रकारका पसल सबै दिन खुल्नेछन्।त्यस्तै डिपार्टमेन्टर स्टोर, सपिङ मल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय सामग्री अटोमोवाइल पार्टस् पसल भने विहान ११ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक्स, निर्माणजन्य सामग्रीको पसल पनि सञ्चालन हुन पाउनेछ ।